ဘန်ကောက်နဲ့ အနီးဝန်းကျင်ကနေထိုင်သူအားလုံးကို သတိနဲ့ ဆင်ခြင်နေထိုင်ကြဖို့ အထူး သတိပေးလိုက်ပြီ – ရှအေလငျး
ဘန်ကောက် မြို့တော်နဲ့ အနီးတစ်ဝိုက် PM 2.5 ပမာဏ ရှိတဲ့ လေထု အဆိပ် ပါဝင်နေတဲ့ မြူမှုန် တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဆိပ်ဓါတ် ပါဝင်နေတဲ့ မိုးရေတွေ မထိတွေ့ မချိုးကြဖို့နဲ့ အကာအကွယ် မပါပဲ အပြင်မထွက်ကြဖို့ ထိုင်းအမျိုးသား မိုးလေဝသ ဋ္ဌာနကနေ သတိပေး ကြောငြာချက်တစ်ခု မနေ့က (16 .1. 2019)ရက်နေ့က ထုတ်ပြန် သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
News. Ko Shwe Nyar
မနေ့က ထိုင်း စံတော်ချိန် 12:00 နာရီလောက်မှာ ထိုင်းဗဟို သတင်းဋ္ဌာနကို ဆေးရုံတစ်ခုကနေ PM 2.5 ပမာဏ ပါဝင်နေတဲ့ လေထုအဆိပ်သင့်မှူ့တစ်ခု အမျိုးသမီး တစ်ဦးမှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ လေထု အဆိပ်သင့်မှူ့ဖြစ်စဉ်ကို ကိုင်တွယ် ကုသပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်ကြီး စထာဖွန် မုန်ခွန်ကဲဝေါ့ ပြောတာကတော့ ဒါဟာ လေထုထဲမှာ ဖုန်မှူန့် မြူမှုန့်တွေနဲ့ ဒီဇယ်ဆီ မီးခိုးငွေ့တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လေထု ညစ်ညမ်းမှူ့ဟာ အလွန်ပိုကဲတဲ့ ပမာဏဖြစ်တာကြောင့် ….
အသားအရေ လောင်ကျွမ်းခြင်းနဲ့ အဖုအပိမ့်နဲ့ ယားနာလို မီးလောင်နာလို ဖြစ်လာတာကြောင့် လူနာဟာ ထိုင်းစံတော်ချိန် မနက် 3:00 အချိန်လောက်မှာ ဆေးရုံကို တက်ရောက် ဆေးကုသမှူ့ ခံယူခဲ့ရပါတယ် အဲ့နောက် ရောဂါ အခြေအနေက တဖြည်းဖြည်း ပိုမို ဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ် ။
သူမဟာ ညဉ့်နက် အချိန်မှာ အပြေးအားကစားကဲ့သို့ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း ကို အပြင်သို့ထွက်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ဒါပေမယ့် လေထု အဆိပ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ နှာခေါင်းပိတ် မတတ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့် လေထု အဆိပ်ကို ရှူရှိုက်မိပီး လေထု အဆိပ်ဟာ သူမရဲ့ အသက်ရူ လမ်းကြောင်းက တစ်ဆင့် အဆုပ်ထဲထိ ဝင်ရောက်သွားဟန် ပေါ်ပါတယ် ။
ညသန်းခေါင် အချိန်မှာတော့ သူမဟာ ပုံမှန် မဟုတ်တော့ပဲ အလွန်အမင်း ယားယံလာခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ် ပီးတော့ အားအင် ချည့်နဲ့ လာသလို ခံစားလာရပါတယ် လေထု အဆိပ်ငွေ့တွေဟာ အရေပြား အတွင်းထိ ဝင်သွားခဲ့ပီး ဆဲလ်များကို ပျက်စီး လာစေခဲ့ပါတယ် ။
ပြီးတော့ အဆိပ်ငွေ့တွေဟာ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကနေမှ တစ်ဆင့် သွေးကြောများစွာထဲထိ ဝင်ရောက် ပျံ့နှံ့ သွားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး မှာတော့ ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း အဖု အပိန့် ယားနာတွေဖြစ်ပီး ဆဲလ်များ လောင်ကျွမ်းကာ ထိုင်းစံတော်ချိန် (11:00) လောက်မှာတော့ နှလုံးရှော့ဖြစ်ကာ အသက် သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒွန်ကန်ချိုင်း ဆေးရုံကြီးကတော့ ဘန်ကောက်နဲ့ အနီးဝန်းကျင်ကနေထိုင်သူအားလုံးကို သတိနဲ့ ဆင်ခြင်နေထိုင်ကြဖို့ အထူး သတိပေးလိုက်ပီး ဒီသတင်းကို အားလုံးသိအောင် မျှဝေပေးကြဖို့နဲ့ အစိုးရအနေနဲ့လဲ PM 2.5 ပမာဏ ရှိတဲ့ လေထု အဆိပ်ကို အခုချိန်ထိ ထိန်းချုပ်မှူ့တွေ ပြုလုပ်မနိုင်သေးပဲ ဆန်းစစ် လေ့လာမှူ့ တွေ ပြုလုပ်လျက် ရှိနေပြီး ….
တချို့သော လေထု ညစ်ညမ်းမှူ့ ပမာဏ များလွန်းတဲ့ နေရာတွေမှာ ည (20:00) 8နာရီနောက်ပိုင်း ဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့ အနီး တစ်ဝိုက်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ သူတွေ အားလုံးကို အပြင် မထွက်ကြဖို့နဲ့ ထွက်တဲ့ အခါမှာလဲ မိမိကိုယ်ကို လုံခြုံမှူ့ရှိအောင် ဝတ်ဆင်ထားသင့်ပီး နှာခေါင်းပိတ် အစည်းများဖြင့် ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ကြပါလို့….။
Crd to Ko Shwe Nyar
ဘနျကောကျ မွို့တျောနဲ့ အနီးတဈဝိုကျ PM 2.5 ပမာဏ ရှိတဲ့ လထေု အဆိပျ ပါဝငျနတေဲ့ မွူမှုနျ တှကွေောငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အဆိပျဓါတျ ပါဝငျနတေဲ့ မိုးရတှေေ မထိတှေ့ မခြိုးကွဖို့နဲ့ အကာအကှယျ မပါပဲ အပွငျမထှကျကွဖို့ ထိုငျးအမြိုးသား မိုးလဝေသ ဋ်ဌာနကနေ သတိပေး ကွောငွာခကျြတဈခု မနကေ့ (16 .1. 2019)ရကျနကေ့ ထုတျပွနျ သတိပေးလိုကျပါတယျ
မနကေ့ ထိုငျး စံတျောခြိနျ 12:00 နာရီလောကျမှာ ထိုငျးဗဟို သတငျးဋ်ဌာနကို ဆေးရုံတဈခုကနေ PM 2.5 ပမာဏ ပါဝငျနတေဲ့ လထေုအဆိပျသငျ့မှူ့တဈခု အမြိုးသမီး တဈဦးမှာ ဖွဈခဲ့တယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ ။
အဲ့ဒီ လထေု အဆိပျသငျ့မှူ့ဖွဈစဉျကို ကိုငျတှယျ ကုသပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝနျကွီး စထာဖှနျ မုနျခှနျကဲဝေါ့ ပွောတာကတော့ ဒါဟာ လထေုထဲမှာ ဖုနျမှူနျ့ မွူမှုနျ့တှနေဲ့ ဒီဇယျဆီ မီးခိုးငှတှေ့ကွေောငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ လထေု ညဈညမျးမှူ့ဟာ အလှနျပိုကဲတဲ့ ပမာဏဖွဈတာကွောငျ့ ….
အသားအရေ လောငျကြှမျးခွငျးနဲ့ အဖုအပိမျ့နဲ့ ယားနာလို မီးလောငျနာလို ဖွဈလာတာကွောငျ့ လူနာဟာ ထိုငျးစံတျောခြိနျ မနကျ 3:00 အခြိနျလောကျမှာ ဆေးရုံကို တကျရောကျ ဆေးကုသမှူ့ ခံယူခဲ့ရပါတယျ အဲ့နောကျ ရောဂါ အခွအေနကေ တဖွညျးဖွညျး ပိုမို ဆိုးရှားလာခဲ့ပါတယျ ။
သူမဟာ ညဉျ့နကျ အခြိနျမှာ အပွေးအားကစားကဲ့သို့ ကိုယျကာယ လကေ့ငျြ့ခနျး ကို အပွငျသို့ထှကျပွီး ပွုလုပျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ ဒါပမေယျ့ လထေု အဆိပျကို ကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ နှာခေါငျးပိတျ မတတျဆငျထားခွငျးကွောငျ့ လထေု အဆိပျကို ရှူရှိုကျမိပီး လထေု အဆိပျဟာ သူမရဲ့ အသကျရူ လမျးကွောငျးက တဈဆငျ့ အဆုပျထဲထိ ဝငျရောကျသှားဟနျ ပျေါပါတယျ ။
ညသနျးခေါငျ အခြိနျမှာတော့ သူမဟာ ပုံမှနျ မဟုတျတော့ပဲ အလှနျအမငျး ယားယံလာခဲ့တာလို့ ပွောပါတယျ ပီးတော့ အားအငျ ခညျြ့နဲ့ လာသလို ခံစားလာရပါတယျ လထေု အဆိပျငှတှေ့ဟော အရပွေား အတှငျးထိ ဝငျသှားခဲ့ပီး ဆဲလျမြားကို ပကျြစီး လာစခေဲ့ပါတယျ ။
ပွီးတော့ အဆိပျငှတှေ့ဟော အသကျရှူ လမျးကွောငျးကနမှေ တဈဆငျ့ သှေးကွောမြားစှာထဲထိ ဝငျရောကျ ပြံ့နှံ့ သှားခဲ့ပွီး နောကျဆုံး မှာတော့ ပုံမှာ မွငျရတဲ့ အတိုငျး အဖု အပိနျ့ ယားနာတှဖွေဈပီး ဆဲလျမြား လောငျကြှမျးကာ ထိုငျးစံတျောခြိနျ (11:00) လောကျမှာတော့ နှလုံးရှော့ဖွဈကာ အသကျ သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒှနျကနျခြိုငျး ဆေးရုံကွီးကတော့ ဘနျကောကျနဲ့ အနီးဝနျးကငျြကနထေိုငျသူအားလုံးကို သတိနဲ့ ဆငျခွငျနထေိုငျကွဖို့ အထူး သတိပေးလိုကျပီး ဒီသတငျးကို အားလုံးသိအောငျ မြှဝပေေးကွဖို့နဲ့ အစိုးရအနနေဲ့လဲ PM 2.5 ပမာဏ ရှိတဲ့ လထေု အဆိပျကို အခုခြိနျထိ ထိနျးခြုပျမှူ့တှေ ပွုလုပျမနိုငျသေးပဲ ဆနျးစဈ လလေ့ာမှူ့ တှေ ပွုလုပျလကျြ ရှိနပွေီး ….
တခြို့သော လထေု ညဈညမျးမှူ့ ပမာဏ မြားလှနျးတဲ့ နရောတှမှော ည (20:00) 8နာရီနောကျပိုငျး ဘနျကောကျမွို့တျောနဲ့ အနီး တဈဝိုကျမှာ နထေိုငျကွတဲ့ သူတှေ အားလုံးကို အပွငျ မထှကျကွဖို့နဲ့ ထှကျတဲ့ အခါမှာလဲ မိမိကိုယျကို လုံခွုံမှူ့ရှိအောငျ ဝတျဆငျထားသငျ့ပီး နှာခေါငျးပိတျ အစညျးမြားဖွငျ့ ကာကှယျဖို့ လိုအပျပွီး မိမိကိုယျကို ကာကှယျကွပါလို့….။
“နိုင်ငံတော်သမ္မတ(ငြိမ်း)ဦးသိန်းစိန် ယနေ့ ဒုလ္လဘရဟန်းခံ”
“မီးပြတ်တိုင်….း ပြောပြောနေကြတဲ့ System Break Down ဆိုတာ…. ဒီလိုပါ”
တရုတ်ပြည်မှတင်သွင်းသောအစားအသောက် 80% သည် စားသုံးရန်မသင့်ဟု...
“အောင်ကိုလတ်နဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့ ပါဝင်လာတဲ့ Myanmar Idol Season...